July Dream: Last 10 days
Posted by JulyDream at 10:08 PM
ဟုတ်.. ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ..
ညီမလဲ နောက်ပိုင်း ကိုဇူလိုင် ပြောသလိုပဲ မေးပြီးမှ တက်ပါတော့တယ်..
သူများတွေနဲ့ မတူတဲ့ စိတ်ကုးလေးပဲ။ :)
အော် မှားလို့ သြော် ကျန်သေးတယ်လေ။ မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်း မကျွမ်းကျင်သူများအား နောက်ဆုံးပိတ် အနီးကပ် သင်တန်းပို့ ချခဲ့ရန်
သူများတွေနဲ့ မတူတာတော့ အမှန်ပဲ။ လူ့ဂွစာ ဇော်ကန့်လန့် ဖြစ်နေကြပါ။
နောက်ဆုံးပိတ် သင်တန်းဆိုတာမျိုး မရှိဘူးဆိုတာ မှတ်ထားပါ။ ဒါကြောင့် သင်ပေးနေတုန်း သေချာ နာခံပါ။ နောင်တ ဆိုတာ နောင်မှ တရတာပါ။ သဘောပေါက်။ ဒါပဲ။ အဟက်...
ဘာပြောရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်သွားလို့ပါ ..
တက်ဂိန်းက ၄ယောက် အများဆုံးတက်လေ.. ဘယ်နဲ့ လည်း ၅ယောက်တောင် များပါ့ .. ဟင်း
(မပါမဖြစ်တာ ထဲ့ရေးဖို့ ကျန်သွားသလားလို့ကိုယ်ပိုင် ပစည်းတွေ အတွင်းအပြင်ပစည်တွေ ဘယ်ကို လျူမတုန်း)
got nite flight to ygn?? :D
၁၀ ရက်ကတော့..ကွက်တိပါပဲ။ တကယ်ဆိုရင်တော့..အပီလေးစားသွားပီ။ ( တကယ်ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်.. ဆိုတလည်း..တွေးစရာမလိုပါဘူးလေ..တကယ်တော့)
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်..ဒီနေ့ပဲ..အသိတယောက်..ရေခြားမြေခြား..မိသားစု နဲ့ခွဲနေရင်..အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့..ရုတ်တရက် ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာ သိလိုက် ရလို့..ပိုပြီး အတွေးပွားမိပြန်တယ်။ သူကတော့..သိပုံပေါ်ပါတယ်။ မတိုင်ခင် ၆ လ လောက်ကို တရားစခန်း ၀င်သွားတယ် တဲ့။
အင်း- မောင်ဇူလိုင်လေး တယောက်..စောစောစီးစီး..ဟို အဖြူ အမဲ..စာရွက်ပါးပါး လေးတွေကို..တောင်ပို့မှန်းသိလို့- ဟူး..တော်ပါသေးရဲ့။း)
ကျွန်တော်လည်း အစ်ကို့လိုပဲ စဉ်းစားကြည့်ဖူး တယ်..။ သူသာဆက်ရှိနေအုံးမယ်ဆိုရင် ဘာတွေကိုများဆက်လုပ်မလဲလို့...။ သူလည်း အမှားမကင်းခဲ့တာ မှန်ပေမယ့်...။ အမှားအနဲဆုံးနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာကိုတော့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်...။
အစ်ကိုရေ...တကယ်ကိုအကွက်စေ့စေ့နဲ့ထောင့်စေ့အောင်စီစဉ်သွားနိုင်တယ်နော်...By the way, တံဆိပ်ခေါင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ညီမလေးကိုမမေ့နဲ့နော်အစ်ကိုကြီး.. :D ညီမလေးကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းပေးမယ်နော်..ဟိ(စတာနော်)
၂ ရက်အလို စိတ်ကူးလေးက အမေကို ချစ်တတ်တဲ့ သားတွေမှာ ရှိတတ်ကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကွာတယ်လို့ မထင်ရဲပါဘူး ခင်ဗျာ။ :)
ဘာပြောရမှန်း မသိလို့ပဲနော်။ အခုတော့ ဒီပို့စ်မှာ တစ်ခုခုတော့ ပြောခဲ့တာပဲဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အတွင်းပစ္စည်းက အိမ်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ အိမ်က လှူချင်ရင် လှူပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်ထုံးစံအရ သေရင် အင်္ဂါစုံမှ ကြိုက်တာဆိုတော့ မိဘတွေ စိတ်မဆင်းရဲစေချင်ဘူး ခင်ဗျ။ ကျွန်တော့် သဘောကတော့ သေပြီးမှတော့ ပိုးထိုးလောက်ကိုက်မယ့် ဒီခန္ဓာကြီးကို လှူပစ်ခဲ့ချင်တာပေါ့ဗျာ။
Tag တာကိုတော့ လူဦးရေ မကန့်သတ်ထားပါဘူး။ ရေးချင်တယ် ရေးမယ်လို့ ပြောတဲ့လူ မှန်သမျှကို ကျွန်တော် Tag ပါတယ်ခင်ဗျ။
ညပိုင်းလေယာဉ် မရှိတော့လည်း ညနေပိုင်း လေယာဉ်နဲ့ ပြန်မှာပေါ့ကွယ်။ ညနေပိုင်း မရှိရင်လည်း နေ့လည်ပိုင်းလောက်ပေါ့ကွယ်။
သတင်းစာတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုက အတော်လေးကို အားကောင်းပါတယ်။ အပြင်စာတွေ မဖတ်တဲ့လူအဖို့ ပြောသမျှ ယုံစေနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို အတော်လေး တွေ့ချင်မိတယ်။ လုပ်ခဲ့သမျှမှာ မှားတာတွေ ရှိနိုင်သလို စေတနာတွေ ထားခဲ့တာလည်း ရှိမှာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သာပါတယ်ဗျာ။
စတာနော် ဆိုလို့ ၁၀ နှစ်တောင် စုခဲ့ရတဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းတွေကို တကယ် မပေးတော့ပါဘူးကွယ်။ အဟဲ...
ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်မယ့်သူဆိုတော့ အလုပ်တွေဖြစ်အောင်ဆို မြန်မြန်သေပါစေ ဆုတောင်းရမလိုဖြစ်နေပြီ။ (ခင်လို့ နောက်တာပါ ... ) စိတ်ကူးတွေ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ကိုဂျူလိုင်ရဲ့ “ဆေးရုံ” ကလေးကိုတော့ ၁၀ ရက်အလို မဟုတ်လည်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရင် ကောင်းမှာပဲနော်။
ဆေးခန်းလေးကတော့ ကျွန်တော် စောနိုင်သမျှ စောစော အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ စိတ်ကူးရှိနေပေမယ့် ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း လုပ်လို့ရတဲ့ အရာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ကျောင်းတက်နေတဲ့ သူက ကျောင်းပြီးဖို့ လိုသေးသလို ဆမ ဆိုတဲ့ လက်မှတ်ကြီးလည်း ရအောင် နိုင်ငံတာဝန် ထမ်းရအုံးမယ်ခင်ဗျ။ တာဝန်ကလည်း ထမ်းချင်ပါတယ် ဆိုတာတောင် posting က ချက်ချင်း မကျပြန်ပါဘူး။ ဒါတွေကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ အချိန် စောင့်နေရအုံးမှာပါ ခင်ဗျာ။
I have lost two of my family members last year. During these days, I always consider about the death. If i can know my last day, I will go toaremote place and never let my family know about it. Because I know how much it hurts to other.
Anyway, I like your plan for your last 10 days. But I think it is very far from now.?. Maybe in another 100 years. I like your blog. Good luck, bro.
သေခြင်းတရားက ကျွန်တော်နဲ့ မစိမ်းပါဘူး။ ရှေ့လမှာတင် ကျွန်တော့်ဦးလေးအကြီးဆုံး ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော် လက်ပေါ်မှာ အသက် ထွက်ခဲ့တဲ့ လူတွေလည်း ရှိသလို လူတွေရဲ့ နာရေးတွေမှာလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ၀ိုင်းကူလုပ်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သေခြင်းတရားကို ကျွန်တော် မတုန်လှုပ်သလို ကျွန်တော့် မိသားစုလည်း ခံနိုင်ရည် ရှိအောင် နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်ထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော့် ရေးထားတဲ့ ၁၀ ရက်ထဲမှာ တချို့ဟာတွေက နှစ် ၁၀၀ အထိ စောင့်စရာမလိုပဲ တကယ်ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရသလို တချို့ဟာတွေကတော့ အနည်းလေး ခဲယဉ်းပါမယ် ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ အခုလို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။